रञ्जु बहिनीको हिम्मतलाई सलाम
यमुना अर्याल print
रञ्जु दर्शना बहिनीलाई सर्वप्रथम आम युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै देशकै केन्द्रविन्दु काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका लागि उम्मेदवारी दिएकोमा अग्रिम बधाइ अनि शुभकामना।
चुनावमा हारजित त भइहाल्छ, तर परिणाम स्वीकार्न सक्नु ठूलो उपलब्धि हो। तिमीजस्ता धेरै युवायुवती बाबुआमाको कमाइमै रमाएका छन्। विभिन्न दुर्व्यसनमा फसेका छन्। नेपालमा भविष्य छैन भन्दै विदेश हान्निएका छन्। तर, त्यही पुस्ताकी तिमीले हिम्मत गरेर राजनीतिजस्तो फोहोरै फोहोरले भरिएको दुर्गन्धित तलाउमा पौडिने हिम्मत गरेकी छौ। फोहोर तलाउ सफा गर्ने अभियानमा आफूलाई उभ्याएकी छौ। पहिलो विजय त यही हो जस्तो लाग्छ।
रञ्जुलाई भावनात्मक रूपमा भोट बटुल्ने अस्त्रका रूपमा अघि सारिएको भन्नेहरू धेरै छन्। हिजो मात्र अमेरिकाका एक मेयरले भिडियो सन्देश पठाई शुभकामना दिएको देखियो। यसरी जताततै चर्चा चुलिइरहने तर अन्त्यमा उनै पुराना पाटीका पुरानै विचारधारा भएका नेताले काठमाडौंको मेयर पड्काए भने के ठान्ने?
युवालाई समर्थन, हौसला र सहयोग गर्ने हो भने भोलि महानगरको रथ उनले गुडाउन नसक्लिन् र? कि मेयर हुन उमेरले पाँच-छ दशक पार गरेको, दारी–कपाल फुलेर सेतै भएको, दुई–चारवटा मुद्दा मामिलामा जेलनेल भोगेको, गुण्डागर्दीको आडमा रजाइँ गरेको, जति पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने, रक्सी, चिया र चुरोटमा मतदाता किन्न सक्ने हैसियत भएको व्यक्ति नै चाहिने हो? यसको जवाफ कहाँबाट पाउने?
तिमीलाई राम्रोसँग थाहा छ बहिनी, राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो। यो खेलमा आफ्नो पक्षमा मत पार्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता साम, दाम, दण्ड, भेद केही कुराको परवाह गर्दैनन्। सायद त्यही भएर उम्मेदवार हेरेर कमैले भोट दिन्छन् र कमैले जित्छन्। यहाँ त पहिले पार्टी हेरिन्छ, अनि पार्टीको आर्थिक क्षमता हेरिन्छ। जसले जति बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ उसकै विजय सुनिश्चित हुन्छ। तिनै राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाएकाहरूसँग जुध्न तिमीले देखाएको हिम्मत र आँटलाई सलाम छ।
अहिले अधिकांश युवा पुस्तामा आफू काठमाडौंको बासिन्दा भएको भए एक भोट रन्जुलाई दिन्थेँ भन्नेहरू धेरै देखिएका छन्। कतिपयले भने खिल्ली पनि उडाएका थिए। कलेजमा शिक्षकले दिएको होमवर्क गर्न अल्छी मान्ने नानी मेयर बन्ने रे भन्दै हाँसो गरिएको पनि सुनिएको छ। यस्ता टीकाटिप्पणीबीच युवालाई हौसला दिने र हतोत्साही गर्ने दुवैको विश्वास जित्न सक्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो।
हिजो टेलिभिजनमा प्रसारित अन्तर्वार्ता हेर्दा २१ वर्षकी क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीले खारिएको नेताले जस्तै एकएक प्रश्नको जवाफ दिएको देख्दा खुसी लाग्यो। राजधानीवासीले एकपटक मौका दिइहाल्छन् कि भन्ने आश पनि जाग्यो। लाग्यो, यी बहिनीजस्तै पवित्र भावनाले सबै नेताले सोच्ने भए देश कहाँ पुगिसक्थ्यो होला? यस्तै भावना भएका युवा पुस्ताको हातमा एकपटक स्थानीय निकायको तालाचाबी सुम्पिने हो भने केही परिवर्तनको भाव देख्न पाइन्थ्यो कि?
यही सन्दर्भमा तिम्रो पार्टीले तिम्रो बारेमा महानगरका कति जनतालाई जानकारी गराएको छ भन्ने प्रश्न मेरो मनमा उब्जियो? महानगरका कति जनताले तिम्रो नाम सुन्न पाएका छन्? कति जनताले उनलाई विश्वास गर्लान्? सामान्य नागरिकले ठूला राजनीतिक पार्टीको भन्दा अरूको नाम थाहा पाएकै हुँदैनन्। उनीहरूका लागि मतदाता शिक्षा पनि पार्टीले दिलाउनुपर्ने होइन र? त्यसैले, रञ्जु बहिनी तिम्रो लडाइँ अझै धेरै बाँकी छ।
मिडियाले यसमा एउटा आधार त खडा गरिदिएको छ, तर त्यसकै भरमा पूरै ढुक्क नबन। गर्न धेरै बाँकी छ। एकैचोटिमा सफल भइयो भने असफलताको स्वाद थाहा हुँदैन। घोडा चढ्ने मान्छे नै लड्ने हो। हिम्मत गरेर मैदानमा ओर्लिएकी छौ, यो हिम्मत सदैव कायम रहोस् शुभकामना।
रञ्जु बहिनी, भावना र यथार्थ भन्ने कुरा अलग हुन्। भावनामा नबहकिएर यथार्थलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नु अग्रिम शुभकामना।
उही तिम्रो समर्थन गर्ने दिदी
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २०, २०७४ ०९:५०:०५